🥇 ▷ Sida loo xaddido isticmaalka xogta mobilada ee Android ✅
Sida loo xaddido isticmaalka xogta mobilada ee Android
Maqaallada kale waxaan tixraacnay kor u kaca codsiyada soo bandhigaya waxa ku jira qulqulka, oo aan aad ugu isticmaalno si aad u wanaagsan ama ka xun. Sida aan u maleyneyno inaad horeyba u ogtahay, isticmaalka adeegyadan noocan ah ee leh shabakad WiFi ma aha nooc isticmaal ah, halka haddii aan adeegsanno xogta moobiilka waxaan haysannaa tiro xadidan oo la cuno. Ka dib xadka isticmaalka, waxaan la kulmi doonaa hoos u dhac aad u weyn xawaaraha biraha. Waqtigaas, wax u fudud sida farriinta loogu diro WhatsApp waxay noqon kartaa odyssey; Hadeysan cadeyn isticmaalkeena, waxay u badantahay in wax sidan oo kale ah ay nagu dhici karaan. Nasiib wanaag, qodobkaan waxaan ku siin doonaa furayaasha si aysan u dhicin, barashada barashada xaddidida macluumaadka aad qarash gareyso.
Sida loo xakameeyo isticmaalka xogta Android
Si loo dhiso xakameynta kharashaadka waa inaan tagnaa goobaha. Qalabka Isticmaalka xogta Waxaan dejin karnaa xaddiga isticmaalka iyo xitaa digniinta marka aan u dhowaanno.
Sida loo dejiyo xadkaan way kala duwanaan doontaa iyadoo kuxiran soo saaraha iyo lakabka hagaajinta ee la isticmaalay. Qeybaha ugu badan saamiga ee Android, markay galayaan Isticmaalka xogta, waa inaad aragtaa wax sidan oo kale ah:
Guji Deji xadka xogta waxaadna arki doontaa farriinta soo socota:
Markaad gujiso In la aqbalo, ayaa ka soo muuqan doona shaashadda laba baararka mobilada. Midka cas wuxuu kuu oggolaanayaa inaad xaddiddo xaddiga xogtaada, halka midabka cirku uu kuu sameyn doono digniin la mid ah inaad qaadatay xaddi cayiman:
Inta badan taleefannada Android, in kasta oo ay jiraan lakabyada isbaddejinta, habka ayaa aad isugu eg. Hada, waxaa jira Terminalyo qaar aan kuu saamaxeynin inaad xad u yeelatid asal ahaan. Xaaladdan oo kale, haddii aan rabno inaan xakameyno qaddarka xogta la cunay, waa inaan u adeegsanaa codsiyada dhinac saddexaad. Tani waa kiiska waxa ku dhacaya taleefannada Xiaomi iyo noocyadii ugu dambeeyay ee MIUI.
Waxa la sameeyo haddii khadkaaga uusan kuu oggolaaneyn inaad xaddido adeegsiga macluumaadka ee hooyo ahaan
Haddii aad naftaada ku aragto xaaladdan, waxaa jira dhowr qaab oo aad fulin karto. Marka hore waxay maraysaa, iyada oo loo marayo aaladda Isticmaalka xogta, xaddid isticmaalka uu sameeyay barnaamijyada shabakadda mobilada. Si aad sidaa u yeeleyso, marka hore hel liiska codsiyada:
Halkaas, ka raadi codsiyada inbadan qaata. Guji mid ka mid ah oo waad gaari doontaa shaashadda:
Sida aad arki karto, halkan waad ku arki kartaa gabi ahaanba isticmaalidda xogta iyo adeegsiga xogta mobilada. Haddii aad sidaas sameyso oo aad uga tagto ikhtiyaarka oo keliya Wifi, codsiyada noocan oo kale ah waxay shaqeyn doonaan oo keliya markaad ku xiran tahay shabakad wireless la yaqaan.
Habka labaad wuxuu ku lug leeyahay adeegsiga Codsiyada wadaha telefoonka sida Movistar, Vodafone ama My Orange. Si kastaba ha noqotee, xalalka noocan ah waxay u shaqeeyaan wax ka badan sidii xubno macluumaad leh, oo aan ahayn kuwa xadidan laftooda. Mid kastaa wuxuu u shaqeeyaa si waafaqsan naqshadda uu soo saarayuhu (ama hawl wadeenku laftiisa) uu go’aansaday, laakiin dhammaantood waa inay lahaadaan aalad kuu oggolaaneysa inaad aragto xaddiga xogta la cunay muddadan biil-biiliska:
In kasta oo aadan adigu awood u yeelan doonin inaad yareyso isticmaalka xogta adiga laftaada app mar aad gaarto xadka qadarka qandaraaska, ugu yaraan waad hubin kartaa si aad ula socoto (Maskaxda ku hay in xogtaan lagugu soo diri doono, sidaas darteed waa isha ugu muhiimsan). Dabcan, waa wax ka cariiri badan marka la eego isticmaalka macluumaadka si qiiro leh, maadaama ay kordhineyso qaddarka tillaabooyinka ay tahay inaad qaado si aad u aragto.
Tani waa meesha habka saddexaad uu ku yimaado, kaasoo maraya rakibo codsiyada dhinac saddexaad. Dareenkan, waxaa jira seddex dalab oo Google ay u xushay sida ugu haboon ee loo ilaalin karo: Glasswire, Maamulaha Xogta My (oo aan u adeegsan doono tusaalahan) iyo Traffic Monitor. Saddexda dhammaantoodba si isku mid ah ayey u shaqeeyaan; kormeere dhammaystiran ee isticmaalka xogta iyo shabakadda WiFi, inkasta oo kiiskan aanu danaynayn dambe. Seddex ka mid ah, marka hore, waa inaad aragtaa ikhtiyaar u ah dejiso qorshahaaga xogta. Mid kasta oo ka mid ah saddexdaas waad dejin kartaa qadarka qandaraaska, maalinta xisaabta dib loo bilaabo oo xitaa geli xaddiga xogta horey loo cunay si app maskaxda ku hay:
Markaad sidaas sameyso, waxaad si muuqata isha ugu hayn doontaa macluumaadka ku saabsan isticmaalkaaga macluumaadka qaab ogeysiin joogto ah:
Sidoo kale mid kastoo ka mid ah xulashooyinkaan waad awoodaa eeg faafaahinta midkasta app:
Maskaxda ku hay in codsiyadan ay kuu oggolaanayaan inaad aragto xogta mobilada, WiFi iyo isticmaalka xogta gudaha wareega haddii ay dhacdo inaad dibadda aado.
Saddexda dalab ayaa waliba kuu oggolaanaya inaad dejiso digniinta isticmaalka Kahor intaadan gaarin isticmaalka xadkaaga ama markaad gaareyso. Hadda, sida codsiyada hawl wadeennada, kuwan barnaamijyada Waxay ku kalsoon yihiin inay tahay adeegsadaha laftiisa ee mas’uul ka ah joojinta adeegsiga macluumaadka moobiilka marba markii uu soo dhowaado ama uu gaaro xadka isticmaalka.